14 | August | 2015 | Love Joshi
(११४) शिक्षाले माछा मात्र खाने होइन, माछा मार्ग पनि सिकावस् ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ११४ )
२०७२ असार ३१ गते विहिवार
(१११) जनताको राय सुझावलाई समावेश गर्नु पर्छ संविधानमा
(११०) हिन्दू धर्मले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकै थियो
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ११० )
२०७२ असार २७ गते आइतवार
हिन्दू धर्मले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकै थियो ।निरपेक्षता त नेपाली जनताको माग हुंदै होइन ।
आज संविधानबारे चर्चा गर्न मन लाग्यो । यो देशमा धार्मिक मेलमिलाप त सदा नै थियो । नागरिकलाई स्वतन्त्रता छंदै थियो । बौद्ध धर्म अनुयायीहरु हिन्दू मठमन्दिरमा श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्दछन् । त्यस्तै हिन्दूहरु विहार,गुम्बामा शीर झुकाइ नै रहेका छन् । ज्ञानमाला भजनमा लीन भएकै छन् । जैन मन्दिरमा पूजा प्रवचन हुंदा सहभागी भएकै छन् । मुस्लिम दाजुभाइको इद पर्वमा सार्वजनिक विदा सरकारले दिएकै छ । नारायणहिटी दरवारको दक्षिणमा विशाल मस्जिदमा प्रति शुक्रवार हजारौं मुस्लिम दाजुभाइले स्वतन्त्रतापूर्वक नमाज पढेकै छन् । राजाहरूले विहानै उठ्दा “अल्लाह अकबर…” को ध्वनि श्रवण गरेर आनन्द लिएकै थिए । क्रिश्चियन समुदायले आफ्नो “प्रभु” को प्रार्थना र बाईबल बाँडेकै हुन् । “गुरुद्वार” राम्ररी चलिराखेकै छ । लुम्विनीले सबैलाई स्वागत गरेर बुद्ध दर्शन फैलाएकै छ ।सर्व धर्म समन्वय छंदै छ ।
के नेपालीले “धर्मनिरपेक्षता” चाहियो भनेर नारा जुलूस ,धर्ना कार्यक्रम गरेर देशै जाम गरेको थियो ?
प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष घेराबन्दी तालाबन्दी भएको थियो ?
प्रचण्डको कडा सुरक्षा तोडेर धर्मनिरपेक्षता मागेको थियो ?
माधव नेपालको पाउ परेर ” कामरेड ! नेपालीलाई धर्मनिरपेक्षता उपहार देऊ” भनेर विन्ति गरेको थियो ?
६०१ जनाले सभामुखलाई माग पत्र पेश गरेका थिए ?
यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ कुनै पनि नेता संग छैन ।
अब समाधान र पश्चाताप यसरी गर्नुस् –
जनमत संग्रह गर्नुस् र आम जनतासंग सोध्नुस् – नेपालको संविधानमा ” हिन्दू राष्ट्र” घोषणा गर्ने कि “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्र” उल्लेख गर्ने ?
जे परिणाम् आउँछ, त्यही स्वीकार हुनेछ , नेपाली जनतालाई ।प
(११३) परीक्षाको उत्तरपुस्तिका विद्यालयमा नै परीक्षण गर्ने चलन थियो ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ११३ )
२०७२ असार ३० गते बुधवार
अर्धवार्षिक र वार्षिक ेपरीक्षाको उत्तरपुस्तिका विद्यालयमा नै परीक्षण गर्ने चलन थियो ।
२०२० को दशकमा बुटवल नगर पंचायतले संचालन गरेको ५ वटा नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक पाठशालाहरुमा पठनपाठन चुष्ट हुन्थ्यो । सुपरीवेक्षण कडाइका साथ हुनुको परिणाम थियो त्यो । अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका विद्यालयमा नै परीक्षण गर्ने चलन थियो । वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरु निर्माण गरिन्थ्यो ।(क्रमश: )
(१०९) पंचहरु शिक्षामा राजनीति गर्थे
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १०९ )
२०७२ असार २६ गते शनिवार
पंचहरु शिक्षामा राजनीति गर्थे
२०२० सालदेखि तत्कालिन बुटवल-खस्यौली नगर पंचायतले नेपालमै पहिलो पटक ५ वटा “अनिवार्य नि:शल्क प्राथमिक प्राथमिक पाठशालाहरु” संचालन गरेर नमूना बनेको थियो । कक्षा १ देखि ५ सम्म शिक्षा पूर्ण रुपमा नि:शुल्क नै हुन्थ्यो । नगर पंचायतले स्थानीय स्तरमा शिक्षा कर लगाएर बजेट व्यवस्था गर्दथ्यो । शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी थियो। तालिम प्राप्त र उपल्लो योग्यता भएकाले ग्राह्यता पाउन्थे । लिखित र अन्तरवार्ताबाट शिक्षकको छनौट हुन्थ्यो । योग्य र क्षमतावानले अवसर पाउँथे ।तलब रु.१२५ / १५५ / २२५ / र ग्रेड तथा तालिम भत्ता आदि सुविधा थियो । म २०२७ सालमा नियुक्ति भएं । एसएलसी मात्र भएकोले तलब १२५ / खान्थें । पुग्थ्यो मस्तिले ।
तर पंचहरु खुब राजनीति गर्थे । शिक्षकहरुलाई गुट-गुटमा विभाजन गर्थे । कोठे मिटिंग र चीया पसलमा जमघट गर्थे । माष्टरहरुको ( त्येतिबेला शिक्षकलाई “माष्टर” भनिन्थ्यो । ) चरित्रबारे सोधखोज गर्थे । माष्टरले कुनै पंचलाई नमस्कार गरेन भने त्यसको खुबै आलोचना गरिन्थ्यो । शिक्षा समितिको बोर्ड वैठकमा निजबारे कुरा उठाइन्थ्यो । पत्र पठाइ स्पष्टीकरण समेत सोधिन्थ्यो । सचेत गराइन्थ्यो । चेतावनी पत्र दिइन्थ्यो । त्यस्तै परेमा जागीर चट ।
(१०८) केहीले बल खुबै खेलाउँथे । केहीले एक किक पनि हान्न पाउँदैनथे ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १०८ )
२०७२ असार २५ गते शुक्रवार
केहीले बल खुबै खेलाउँथे । केहीले एक किक पनि हान्न पाउँदैनथे ।
२०२७ / २०२८ सालतिर खाली पिरियडमा विद्यार्थीहरूलाई भुलाउने माध्यम क्यारेम बोर्ड , लूडो, स्किपिंग, कबड्डी र फुटबल आदि साधन प्रयोग हुन्थ्यो । यस बाहेकको अर्को साधन ” अन्ताछडी” थियो । अन्ताछडी खेलाउँदा सबैले रमाइलो माने पनि हल्ला बढी हुने गर्थ्यो । संगैको कक्षालाई बाधा हुन्थ्यो । यसर्थ खुल्ला चौरमा फुटबल खेलाउँथें ।रेफरी स्वयं बन्थें । संख्या र नियमको मतलब गरिन्नथ्यो । एउटा बल दिए पछि कक्षाका सबै मैदानमा दौडन्थे । केहीले बल खुबै खेलाउँथे । केहीले एक किक पनि हान्न पाउँदैनथे ।यस्तै खेलमा विद्यार्थी रमाउँथे । खाली घंटीमा विद्यार्थी कन्ट्रोल सजिलै हुन्थ्यो ।
(१०७) अंग्रेजी विषय पढाउन अप्ठेरो थियो
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १०७ )
२०७२ असार २४ गते विहिवार
अंग्रेजी विषय पढाउन अप्ठेरो थियो
प्राथमिक कक्षामा अंग्रेजी पढाउनु सजिलो कुरा थिएन । Capital and Small alphabets , Simple words,Sentence formation आदि साना कक्षालाई पढाइन्थ्यो । कक्षा ४-५ लाई सामान्य पुस्तक हुन्थ्यो ।
Translation र Story पनि पढाइन्थ्यो । विद्यार्थीहरूलाई story को अनुवाद गरेर पढाउँदा बडो चाख लिएर पढ्थे
Question / Amswer गर्नु प-यो भने उनीहरुलाई भारी बोकाएकोझैं हुन्थ्यो ।वाचन पनि गर्न सक्दैनन् थिए ।
ब्रिटिश सेनामा काम गर्ने अभिभावकहरुको छोराछोरी भने अंग्रेजीमा राम्रो हुन्थे । उनीहरुको घरको वातावरण पनि शिक्षित प्रकारको हने हुनाले त्यसको प्रभाव कक्षामा पनि देखिन्थ्यो । अन्य विद्यार्थीलाई अंग्रेजी पढाउँदा ” दिन भरि करायो, बाजेको दक्षिणा हरायो” झैं हुन्थ्यो ।
(१०६) जान्ने,नजान्ने सबैलाई फाइदा पुग्थ्यो ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १०६ )
२०७२ असार २३ गते बुधवार
जान्ने,नजान्ने सबैलाई फाइदा पुग्थ्यो ।
त्यसबेला ( २०२७ साल ) कक्षामा आफ्नो विषयको पाठ पढाएपछि गृह कार्य दिनु पर्ने अनिवार्यता थिएन । तर पनि पाठको प्रकृति अनुसार विद्यार्थीहरुले बुझेबुझेनन् भन्ने मूल्याँकन गर्न गृह कार्य दिनु शिक्षकको स्वविवेकमा भर पर्दथ्यो । गृहकार्यलाई home task भन्ने चलन थियो । साताको २-३ दिन म होम टास्क दिन्थें । प्राय: होम टास्क पुस्तकको अभ्यास भित्रैबाट दिन्थे । सबै विद्यार्थीसंग किताब भने हुंदैनथ्यो । त्यसैले कालोपाटीमा प्रश्न लेखी दिन्थें । उनीहरु आफ्नो कापीमा सार्थे ।कोही सार्थे । कोही सार्न पनि जान्दैनथे । जान्नेलाई नजान्ने साथीको कापीमा होम टास्कको प्रश्न सार्न अह्याउँथें । केहीको कापीमा म आफैले पनि लिखि दिन्थें । अर्को दिन होम टास्क चेक गर्न कापी जम्मा पार्थें । ८-१० जनाले मात्र बुझाउँथे ।नबुझाउनेलाई कारण सोध्दा जवाफ दिन्थे – आएन, बिर्सें, किताब छैन, बत्ती निभ्यो , मट्टितेल सकियो । कोही मौन हुन्थे । यस्तो अवस्था सधैं आउँथ्यो ।
समाधान आफैले निकाल्थें । प्रश्न -उत्तर कालोपाटीमा लेखि दिन्थें । सस्वर वाचन गर्थें । सबैलाई ठूलो स्वरमा दोह्र्याउन लगाउथें । यो प्रक्रिया ४-५ पटक चलाउंथे । यसो गर्दा जान्ने,नजान्ने सबैलाई फाइदा पुग्थ्यो ।
(१०५) आत्मविश्वासका साथ पढाउँथें । शिक्षणमा म रम्न थालें ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १०५ )
२०७२ असार २२ गते मंगलवार
आत्मविश्वासका साथ पढाउँथें । शिक्षणमा म रम्न थालें ।
त्येतिबेला कक्षा कोठा ७०-८० जना विद्यार्थीले भरिएका हुन्थे ।शिक्षकहरुले ठूलो स्वरमा चिच्चाइ -चिच्चाइ पढाउनु पर्दथ्यो । शिक्षण विधि थियो – lecture / प्रवचन विधि । शैक्षिक सामग्री केही मात्रामा हुन्थ्यो । मैले किताब र कालोपाटी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो । मैले विद्यार्थीहरूलाई पनि जीवन्त शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्थें । भारतीय अखवार “आज”, पत्रिकाहरू “धर्मयुग” ,”दिनमान”,”नवनीत ” र “सरिता” आदि पढ्दा नयाँ विधि सिक्थें ।यद्यपि म नयाँ र काँचो शिक्षक थिएं । तर आत्मविश्वासका साथ पढाउँथें । शिक्षणमा म रम्न थालें ।